Indonezia: Fitaovana Fandraketana An-tsarintany Ny Fahasimban’ny Ala Ao Sumatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2012 10:48 GMT
Misy fitaovana iray vaovao fandraketana ho anaty saritany ka manome tahirin-kevitra mikasika ny fahasimbana mahavalalanina mahazo ny ala mandrakotra ny Nosy Sumatra ao Indonezia. Sumatra, nosy iray isan'ny lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, dia toerana iray hany fantatra fa misy elefanta, rhinos, tigra sy ‘orangutans’ miara-monina. Tandindonin-doza io fifangaroanà zava-manan'aina ao Sumatra io satria ny 50 isan-jaton'ny ala voajanahary ao amin'ilay nosy no simba nanomboka tamin'ny 1985, saika noho ny fampiroboroboana tafahoatra sy mivatravatra ny famokarana menaka azo avy amin'ny voanio.
Ilay fitaovana ho fandraketana anaty sarintany dia novokarin'ny WWF-Indonesia, ny fifandrimbonan'ireo ONG Eyes on the Forest, sy ny Google Earth Outreach.
Google Earth Outreach dia mino fa ilay fitaovana dia ho afa-mitari-dàlana ireo mpampiasa azy hanamarina raha toa ka marina tokoa ny fanambarana nataon'ireo orinasa mpanodina menaka voanio mikasika ny fiarovana ny tontolo nambaran-dry zareo.
Ny ONG Eyes on the Forest dia manazava ny fomba azon'ireo mpampiasa aterineto atao hananganana ny saritanin-dry zareo manokana amin'ny alalan'ireo fitaovana ety anaty aterineto